Floor Lamp, Table Lamp, Lamp Shade, akatungamirira Adapter, pasherefu Floor Lamp - rakanaka
Mutiraipodhi Floor Lamp
Sherefu Floor Lamp
1-5W akatungamirira Adapter
6-12W akatungamirira Adapter
18-24W akatungamirira Adapter
Jekesa rako mukati dzedu nevamwe, mugadziri Metal uriri rambi. Baya jekiseni muumbozha kupinda makona uye rakapoteredzwa namabiravira, kana kutizira unodziya, mumhepo kuverenga nook. Browse kugadzirwa yedu panguva uye zvetsika chiedza, kubva domed simbi mazano uye Moroccan-akafuridzirwa mwenje, kuti yakashongedzwa Metal magetsi uye varefu, mutete zvekunyanyisa.
High pamusoro Style, mutiraipodhi uriri rambi pakarepo kuwedzera classiness chero nzvimbo! Taura kona kana rimwe parutivi pasofa wako mumba mupenyu nokuda unodziya Kunze. Ita musha wako unodziya inopenya mhinduro kubva yedu chiedza muunganidzwa panguva dzinokosha Light. Funga uriri mwenje pamwe apedzerana simbi, mutiraipodhi zvivako kana emapuranga mashoko.
Table mwenje kukutendera yakanaka-nomuimbirwo kuonekwe mukamuri zvakawanda chete. Ivo kukupa mamwe chiedza apo wava apo kuwedzera zvishoma unhu. Tatsveyamisa anowanika navanopinda vakasarudzwa zvitaera kuwedzera zvishoma zvokuwedzera ruvara, unaku uye chiedza kuti home.Metal wako Table rambi, Wood tafura rambi, USB tafura rambi ...
Modern uye dzakanaka, ichi pasherefu Floor Mwenje kubva yakanaka Chiedza anowedzera pakarepo werudzii chero nzvimbo. Izvi rambi hunoshamisa pave mupfumi, yakashongedzwa ambience, uye kaviri sezvo maviri okutonga pasherefu, kupa wakakwana panzvimbo kuratidza mabhuku enyu, vases kana mufananidzo mapuranga. Izvi zvinobatsira uye Stylish pasherefu uriri rambi vachatarira inotevera guru pachigaro chako, pasofa kana zvimwe piece fenicha mumba mako.
Akanaka Light Technology Co., LTD. yakavakwa 2015 uye Located pana Shenzhen.Weare ritaure kugoverwa mhando indoor inotakurika mwenje kuti customers.Justafter yedu rimwe gore, tinobudirira kuwana mutengi kuvimba uye kukwirira rumbidzo withexcellent yepamusoro uye completive price.Our Customers havasi chete ChinaMainland, asiwo Europe, America uye kuSoutheast Asia.Most pamusoro ourcustomers zvave ane ukama kunyange simba, kubva zvavo businesspartner basa nzira naye. Kuti vasangane customersrequirements edu Takavaka mukoma Light fekitari-Grand Champ LightingTechnology Co, LTD pa Huizhou. Nenzira iyi, zvinhu zvedu zvakawanda completiveprices uye zvigadzirwa Range hunopfumiswa, Kubva akatungamirira mutyairi kuti akatungamirira mwenje, kubva lampparts kuti Pedzisa lamps.We yakatsauka nokutengesa USA Target, Walmart uye BBB.
Muna 2017, maererano manycustomers zvinodiwa, tiri kudzidza uye kugamuchira tsamba orders.As pamusoro lineshopping haana chete kuchingamidzwa muna China, asi dzinotengeswa zvinobudirira ose pamusoro world.Nowour zvinhu pamusoro Amazon uye Taobao, TMall.COM And JD .COM tiine unhu hwedu hwakanaka uye mitengo, especiallyour pasuru duku vari kufarira makasitoma edu.
Yakanaka Light, ndiko yourgoodly Sarudzai uye kuti chiedza enyu akanaka!
R1120, Tiedong Park, Ping ane Road, Pinghu Street, Longgang Destric, Shenzhen, China, 51811
Dana isu zvino: + 86-0755 28684337